Caasimaada wadanka Somaliland
Hargeysa ama Hargaysa ( ) waa caasimada dalka Somaliland.  Wakhtiyadii hore, magaalada Hargaysa waxay ka tirsanayd maamulkii Saldanadii Cadal ee ka arimin jirey deegaano badan ee ku taala Somaliland. Boqortooyadii Ingiriiska ayaa magaalada Berbera ka dhigay magaalo madaxdii British Somaliland, waxa sanadkii 1941 lagu wareejiyay magaalo madaxda caasimada Hargeysa. Sannadkii 1960 waxay madaxbanaani heshay ilaaladii gobolada Waqooyi kuwaasi oo la midoobay Koonfurta Soomaaliya, sidaasi ayaa Hargaysa ku dhaaftey magaalo madaxnimadi. Laakiin waxay magaaladu ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu wayn Soomaaliya.Kadib markii ay Soomaaliya ka dhacday dagaal sokeeye ayay sanadkii 1991 noqotay caasimadda jamhuuriyadda Somaliland.
Last edited on 11 Diseembar 2021, at 07:38